KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 24/06/2012
ဇွန်လ 27, 2012
လောကကြီးဟာ တစ်ခါတစ်လေတော့ တော်တော်လေးကို ဆန်းကြယ်ပါတယ်။
ဟောဒီ အင်ဒိုနီရှားက ချန်ဒရာ ၀စ်(စ)နု ကိုတော့ သတင်းတွေထဲမှာ Bubble man ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖားပြုတ်လူသားလို့ ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၃ နှစ်အချိန်တုန်းကတော့ ချန်ဒရာအတွက် အပျော်ဆုံးအချိန်ပေါ့။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက တောရွာကလေးမှာ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဇနီးသည်နဲ့အတူ ဘ၀သစ်အတူစခဲ့ကြတယ်။ ချန်ဒရာရဲ့ ဘ၀မှာ ဒီလိုအိပ်မက်ဆိုးတွေ စပေးတာကတော့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာပါ။ ရှားပါးလှတဲ့ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲရောဂါတစ်ခု အဖြစ် သူ့အရည်ပြားပေါ်မှာ ပန်းရောင် အဖုလေးတွေ စထွက်လာ ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်မှာတော့ သူ့ ကျောပြင်ပေါ်ကို ပြန့်နှံလာခဲ့ပြီး အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်မှာတော့ သူ့တစ်
ကိုယ်လုံးကို အဖုအပိန့်တွေ လွှမ်းခြုံသွားခဲ့ပါတယ်။
အခု အသက် ၅၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ချန်ဒရာဟာ အိမ်အပြင်ကို ထွက်ခွာခဲပါတယ်။ သူ့ကိုလူတွေ တွေ့မြင်သွားရင် ကြောက်လန့်နေမှာစိုးလို့ အိမ်အပြင်ကို တောင်မထွက်နိုင်ပါဘူး။ သူ့သမီးကို ကျောင်းပို့၊ကျောင်းကြိုအတွက်တော့ အိမ်ကနေထွက်ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဒီလို ထွက်တဲ့အခါမှာလည်း အကျီင်္တွေ အထပ်ထပ်ဝတ်ဆင်၊ မျက်မှန်တပ်ပြီးမှ အိမ်ကနေ ထွက်ရပါတယ်။ သူ့သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့လိုအဖေမျိုးရှိရလားဆိုပြီး သူ့သမီးကို မလှောင်ပြောင်စေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ္စာရှိလှတဲ့ သူ့ဇနီးကို ချန်ဒရာက
“နင် ငါ့ အဝေးကို ထွက်သွားပါ၊ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာပါနဲ့” လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် ဇနီးဖြစ်သူကတော့ “ကျွန်မ ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အရည်ပြားအပေါ်ယံ သဏ္ဍာန်ပြောင်လဲသွားယုံနဲ့ ကျွန်မ သူ့ကို ပစ်မသွားပါဘူး။
ကျွန်မဟာ သူ့နဲ့ တစ်ဘ၀လုံး လက်တွဲသွားမှာ ဖြစ်သလို သူခုလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကျွန်မမှာ စိတ်ပျက်အား
လျှော့မယ့်အစား ပိုပြီးတော့တောင် အိမ်ထောင်စုအတွက် ခွန်အားတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်”
ခုလို သူ့ရဲ့ အဖြစ်ကို ချန်ဒရာက ကမ္ဘာကိုထုတ်ပြခဲ့တာကတော့ သူ့သားသမီးတွေအတွက် စိုးရိမ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သားအကြီး မာတင် ၃၂ နှစ်နဲ့ သမီငယ် လစ်(စ်)တို့မှာလည်း ဒီရောဂါ လက္ခဏာတွေ စပြနေပါပြီ။
“ကျွန်တော့် ကလေးတွေမှာလည်း ဒီလိုရောဂါမျိုး စဖြစ်နေပြီ။
သူတို့ဟာ ရောဂါဒီထက်ပိုမို ဆိုးရွားလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်”။
ချန်ဒရာဟာ သူ့ သား၊သမီးတွေကို ဆေးကုသဖို့၊ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ ငွေကြေးလည်း မတတ်နိုင်ရှာပါဘူး။ သူစိုးရိမ်တာက တစ်နေ့ သူ့ ကလေးတွေဟာ သူ့လိုမျိုး ဖြစ်သွားမှာကိုပါပဲ။
တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါကို အခမဲ့ ကုသပေးမယ့်သူရှိရင်တော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို ရချင်ပါတယ်
လို့ ချန်ဒရာက ပြောသွားပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလဖြစ်သော်လည်းကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြို့နယ်တွင် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်ခံရသူများ ရှိနေသည်ဟုဒေသခံ လူထုများက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ကြားမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံမှမွတ်ဆလင် (၅)ဦးက ၀ိုင်းပြီး လက်နက်လုရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“မနေ့က ညနေ (၈)နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ ပစ်သံပြေးလွှားအော်ဟစ်သံတွေ ကြားလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်အနီး တံတားမှာ လုံခြုံရေးချထားတဲ့ လုံထိန်းရဲတစ်ယောက်ဆီကနေ ကုလား (၅)ယောက်က ၀ိုင်းပြီးသေနတ်လုတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်″ ဟု မောင်တော မြို့သူကြီးရပ်ကွက်နေ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုအခင်းဖြစ်ပွါးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ မောင်တော ၄ မိုင် အခြေစိုက် လုံထိန်းရဲတပ်ရင်းအမှတ် (၂) ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တာဝန်ကျ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေ ဘာကြောင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ် အရွေးခံကြရသလဲ....... ဘယ်သူ.မှတာဝန်ရှိသလဲ.............
(၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (ခ) ဇော်ကီးအာမတ်သည် ယခုအခါ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား
အမှတ် ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၉၅၁ ကိုင်ဆောင်ထားသော်လည်း ၎င်း၏ မိဘများဖြစ်သောဘင်္ဂလီလူမျိုး(ဘ)ဦးနူရ်အာလမ်(၁၁/မတန(ယ)
၀၉၂၂၂၆)နှင့် (အမိ) ဒေါ်ခေါ်တီဇာ (၁၁/မတန(ယ)၀၉၂၂၂၈)
မွေးဖွါးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်တရားဥပဒေနှင့်အညီ မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၆)၊ အခန်း (၉)သို့ရောက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိပြီးနိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားကို တနည်းနည်း ဖြင့်ရယူထားသူသာဖြစ်ပါသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေ၎င်း၏
(၂) မောင်တောမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဌေးဝင်း(ခ)
ဇာယာဒ်ရော်မန် သည် ယခင်က အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ
ကိုင်ဆောင်ကြသည့်ဘင်္ဂလီလူမျိုး (ဘ) ဦးအိုဆီဒူရော်မံ (AK၀၄၇၂၇၇)နှင့်(အမိ)ဒေါ်ဇီနူဘာဟာရ်(AK၁၀၈၃၆၈)တို့မှ
မောင်တောမြို့နယ်၊ ဟာဘီကျေးရွာတွင် (၃-၄-၁၉၆၂)ခုတွင် မွေးဖွါးသူဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ယခင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ (MDW ၂၄၇၄၇၇)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၁၁/မတန(ယ)များကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသော်လည်း နိုင်ငံသားများ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် တနည်းနည်းဖြင့် အမှတ်(၂၆)၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ နေထိုင်ခွင့် ရရှိနေပါသည်။
(၃) မောင်တောမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမင်း(ခ)ဇာဟိန်းဂိရ် သည် ဘင်္ဂလီလူမျိုး (အဖ)ဦးရော်ရှီးအာမတ် (AK၀၁၅၆၁၈)နှင့် (အမိ)ဒေါ်ဒူဘာဟာရ် (AK ၀၁၅၆၁၉)တို့မှ မောင်တောမြို့နယ်၊စံပါယ်ကုန်းကျေးရွာတွင်
(၂-၆-၁၉၅၀)နေ့၌ မွေးဖွါးသူဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ယခင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားအမှတ်မှာ (AK 195265)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၁၁/မတန(ယ)ကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသော်လည်း
(Kyaw Swar Myint ၏ status မှ ကူးပါသည် )
BY ရဲရင့်(ကနေဒါ) ... 6/28/2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:59 AM No comments:
အဲခေါင်သောင့်၊ ဇွန်လ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တက်ရောက်လာသည့် ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးမှ လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားပြီး တက်ရောက်လာ သူများကလည်း ၄င်းတို့ သိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည်ဟု တွေ့ဆုံပွဲကို စီစဉ်သူ OKRSO ကော်မတီဝင်တဦးက ပြောဆိုသည်။
၄င်းက "အဓိက ကတော့ လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရနဲ့ ကေအဲန်ယူတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ ပဒိုအားတိုးကတော့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ် ဘယ်လောက်ရောက်နေလဲဆိုတာထက် လှေကားထစ်လိုမျိုး တလှမ်းပြီး တလှမ်း ဆက်လှမ်းသွားဖို့ ပြောသွားတယ်။ နောက် မြန်မြန် ဆန်ဆန်လည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ မြန်မြန်လျှောက်ရင် ခလုပ်တိုက်နိုင်တယ်လေ။ အရင်ကလည်း အမြဲအလိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ ဒီတခါတော့ သတိကြီးစွာနဲ့ ဆက်သွားမယ်။ လောလောနဲ့လည်း မသွားချင်ဘူး။ ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန် သွားဖို့ အဲဒါကို အဓိကထား ပြောသွားပါတယ်"ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲကို ဘန်ကောက်အခြေစိုက် OKRSOခေါ်သည့် အဝေးရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ လူမှု စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ စီစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး OKRSOအဖွဲ့ဝင်လူငယ်များ၊ ဘန်ကောက်ရှိ ကရင်ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ လူငယ်များနှင့် အခြားတသီး ပုဂလိက ကရင်လူငယ်များက စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုနေ့ နေ့ နေ့လည်ပိုင်းကလည်း OKRSOမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အနှစ် ၂၀ပြည့် မြောက်သည့် အခမ်းအနားကို ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်များက တက်ရောက် အားပေးခဲ့ပြီး ကေအဲန်ယူမှ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပဒို စောလှထွန်းက ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
"အဓိကတော့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ အနှစ် ၂၀ပြည့်မြောက်တဲ့ အခမ်းအနားကို ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်တွေက လာရောက်အားပေးတာပဲ။ အဲဒါနဲ့ တဆက်ထဲ ညနေပိုင်းမှာ အဲလို တွေ့ဆုံ ပွဲလေး လုပ်သွားတာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ အခုလို လာရောက်အားပေးတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ အလွန်ပဲ ၀မ်းသာပြီး အားအင်တွေ ရရှိလာပါတယ် နောက် မရှင်းမလင်းတာတွေ ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပိုမို သိရှိလာရပါတယ်"ဟု အဆိုပါ ကော်မတီဝင်ကပဲ ပြောဆိုသွားသည်။
ကေအဲန်ယူ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်မှ ဘန်ကောက်ရောက် ကရင်လူငယ်နှင့် တွေ့ဆုံမှုသည် အပစ်ရပ် သွားရောက်ဆွေးနွေးပြီးသည့် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပြီး OKRSO၏ နှစ် ၂၀ပြည့် အခမ်းအနားကို ယခုလို ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်တွေ တရားဝင် လာရောက်အားပေးသည်မှာ နှစ်၂၀အတွင်း ပထဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဇွန်လ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ လူနာများအား အခမဲ့ကုသပေးနေသည့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ မယ်တော်ဆေးခန်းကို ယနေ့မနက် ၆နာရီ ကျော်တွင် သွားရောက်ကာ မိနစ် ၂၀ ခန့် လေ့လေကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ဦးအောင်မင်းနှင့်အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့က ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နှင့် မဲဆောက်မြို့ Wattana Village Resort ဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ယခုလို မယ်တော်ဆေးခန်းအခြေအနေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအပါအ၀င် ထိုင်းအစိုးရကပါ လာရောက်လေ့လာ နေကျဖြစ် သော်လည်း မြန်မာအစိုးရဘက်မှ ပထမဆုံး လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည့်အပေါ် နယ်စပ်ဒေသ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“ရေရှည်မှာ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ရမယ့် ကိစ္စလည်း အများကြီးရှိတာပေါ့။ ကျန်မာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ ကလေးအခွင့် အရေးတွေ အကုန်လုံး အကျယ်ကြီးရှိတယ်။ သို့သော်လည်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ကြည့်ရဦးမယ်။ ကျန်းမာရေးဖြစ်စဉ် တခုတည်းလည်း ကြည့်လို့ မရဘူးပေါ့။”ဟု သူမက ပြောသည်။
မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်စဉ် ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့သည် ဆေးခန်းရှိ အတွင်းလူနာ သားဖွားမီးယပ်ဌာန၊ အတွင်းလူနာကလေးဌာနနှင့် မျက်စိဌာနတို့ကို လေ့လာခဲ့ပြီး ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က ဆေးခန်း၏ အခြေ အနေများနှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးအခြေအနေများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့သည် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်အား လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ကာ မယ်တော်ဆေးခန်းအတွက် အလှူငွေ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၅၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်း)ပေးအပ်ခဲ့သလို ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်ရီမှလည်း အတွင်းလူနာကလေးဌာနရှိ ကလေး လူနာများကို စာအိတ်ဖြင့် ငွေလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်မှလည်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသရှိ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝင်သည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဦးအောင်မင်းအား ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက “ဒီမှာလာတာ ပညာရှင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒါတွေအားလုံးကို ဒီမှာလာ ပြီးတော့ သမ္မတကြီး (ဦးသိန်းစိန်)ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်ပြောတာပေါ့ဗျာ။ အဖွဲ့ ၁၄ဖွဲ့ လောက်တွေ့တယ်။ အခု ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာ စနစ်လည်း ပြောင်းပြီးဆိုတော့ ဒီနယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့သူတွေ ပြန်လာကြဖို့၊ ပြန်အလုပ် လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ယခု ခရီးစဉ်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ စီမံချက်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ ၅ကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ် ဖြစ်သကဲ့သို့ တွေ့ဆုံခဲ့သူများကို နားလည်အောင် တင်ပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် လက်ခံ မခံသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
မယ်တော်ဆေးခန်း၏ အတွင်းလူနာ သားဖွားမီးယပ်ဌာန၏ အစီအစဉ် စီမံခန့် ခွဲသူ(Program Manager) နော်ဆိုဖီယာက “အခုလို သူတို့(ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့) လာရောက်တော့ ကျမတို့ လက်တွေ့မြင်နေရတဲ့ အခြေ အနေတွေ သိသွားတာပေါ့။ နောက်ထပ် ဒီထက်သိချင်လို့ အခွင့်အရေးကြုံရင် လာပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ ကြိုဆိုပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ယခု မဲဆောက်ခရီးစဉ်အတွင်း ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၉ဦးပါဝင်ပြီး ယမန်နေ့က ဒေါက်စင်သီယာမောင် အပါအ၀င် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNUနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး-ABSDF စသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
UNHCR မှ MR . DANIEL အားနှုတ်ဆက်မည်ပွဲကို၂၄-၆-၂၀၁၂ ညနေ ၅နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
အကြောင်းအရာ ၊၊ ၊၊ UNHCR မှ MR . DANIEL အားနှုတ်ဆက်မည်ပွဲဖိတ်ကြားခြင်း
UNHCR မှMR. DENIELသည်ဒီလကုန်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်မှာ
MR. DANIEL သည် UNHCR. ဒုက္ခသည်များအားကာကွယ်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိဖြစ်ပြီး
နေ့ ရက် ။ ။၂၄-၆-၂၀၁၂
အချိန် ။ ။ ညနေ ၅နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိ
နေရာ ။ ။ WASEDA. AVACO HALL
WASEDA. ဘုတာထွက်ပေါက်. 3b
( ဝင်ကြေး တယောက်ယန်း ၁၀၀၀ )
မှတ်ချက် ။ ။ ကျေးဇူးပြု၍အစားအသောက်ပြင်ဆင်မှုအခက်အခဲမရှိစေရန်လူကြီးမင်းများမှတက်ရောက်မည့်
လူအရေအတွက်ကို 20-6- 2012 ( သို့ ) 21-6-2012 နေ့ နောက်ဆုံးထား၍အကြောင်းကြား
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတ်မှတ်ပေးလိုက်သော ကရင်တော်လှန်ရေးခေါင်ဆောင် စောဘဦး ၏ ကျောက်တိုင်
- ဒီမိုကရင် --၁၈-၆ -၂၀၁၂
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ ယခင် ဦးနု အစိုးရလက်ထက်က ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု ကိုယ်တိုင်စိုက်ထူပေးခဲ့သော အာဇာနည်ကျောက်တိုင်အား (၁၄-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ကံ မှ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ပြည်သူလူထုအား တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကရင်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဦးစောဘဦး ၏ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင် ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ပြောကြားလိုက်သည်။
၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်အတူ တွေ့ ရသော ကရင်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဦးစောဘဦး
၄င်းအာဇာနည်ကျောက်တိုင်သည် နအဖလက်ထက်က ပယကဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး စောခင်စိုးမှ အာဇာနည် ကျောက်တိုင်ကို ကုန်သည်ကြီးများ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ် (တရုတ်မ)ထံ ရောင်းစားခဲ့သည်။
ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်ဆိုသူသည် အာဇာနည်ကျောက်တိုင်ကို ၀ယ်ယူသည့်အပြင် စည်ပင်သာယာပိုင် ဒုံမေပတီဈေးမြေနေရာနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းပေါ်ရှိ အများပိုင် ကုန်သွယ်ရေးရုံးတို့ကိုပါ အာဏာပိုင်နှင့်ပေါင်းကာ တရားမ၀င် ၀ယ်ယူထားခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်သင်းသင်းမြတ် ဆိုသူသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ နိယုံး (ကုန်သည်များဥက္ကဌ) နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာအာဏာပိုင်များကို လဘ်ပေးလဘ်ယူ လုပ်ကာ ကြိုးကိုင်ခိုင်းထားသည်။
မကြာသေမီ လပိုင်းခန့်က (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် နိယုံး၏ ညီဖြစ်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသား တဦးကို ပတ်စ်ပို့ မပါပဲ မြ၀တီမှတဆင့် ဘားအံမြို့ကို ခေါ်ဆောင်ကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းခန့်က ပဲခူးမြို့အ၀င်တွင် ဂျူတီမဲ့ပစ္စည်း မှန်လုံကား(၄)စီး ကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၄င်းမှန်လုံကားများပေါ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံကို ဖြတ်ကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ သယ်ဆောင်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားအရက်မျိုးစုံကို ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းခံရသည်။ နိုင်ငံခြားအရက်များ ခိုးသွင်းနေသည်ကို မြ၀တီမြို့ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ သိသော်လည်း မဖမ်းရဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို ခါးပိုက်ဆောင်ထဲ ထည့်ထား၍ နိုင်ငံခြား အရက်မျိုးစုံ ပါသော မှန်လုံကား(၄)စီး သံလွင်တံတားကို လွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြတ်ကာ ပဲခူးဂိတ် ဈေးညှိမတည့်၍ အဖမ်းခံ လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်၏ အဓိက ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံခြားအရက်မျိုးစုံ ခိုးသွင်းခြင်းဖြစ်၍ နှစ်(၂၀)ကျော် ရင်းနှီးစွား ကုန်သွယ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခိုးသားငါးရာ ၀ိုင်းရံထားသော ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဇော်မင်း သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အာဇာနည်ကျောက်တိုင်အား အများပိုင်မြေအဖြစ်သတ်မှတ် ညွှန်ကြားပေးရန် လမ်းညွှန်ချက်ကို မကျေနပ်၍ တရုတ်မ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကရင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် စောဘဦး ၏ ကျောက်တိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်ဟု ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ထပ်ဆင့် ညွှန်ကြားသည်ဟု သိရှိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဘဲဥကို မုန်လာဥ လုပ်သည့်နေရာတွင် အရမ်းကျွမ်းကျင်ခဲ့လို့ ဒုတိုင်းမှူးဘ၀ကနေ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်အသိုင်းမှ ဝေဖန်မှုများ ပြန့်လွင့်ခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ယခင်က ၀န်ထမ်းများကို ပါးရိုက်၊ စောင့်ကန်၊ ဆဲဆိုခြင်းများနှင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါ ၄င်း၏ အသံမထွက်ရန် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ တဆင့် မိုက်ရိုင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ် စေခဲ့သည်။
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့သည် ၄င်းတို့၏ မွေးထားသော မိဘမျက်နှာ မထောက်ပဲ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ မိုက်ရိုင်းစေသည့် အပြုအမူကို ကျင့်သုံးကာ ပြည်သူများကို ဆက်ဆံကြသည်။ ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကိုပင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လူမှုအစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် ခင်ဗျားပါးစပ်ပိတ်ထားဟု မိုက်ရိုင်းစွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြ၀တီမြို့ ပြည်သူများအနေဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အမြန်ဆုံးပြောင်းစေချင်ကြသည်ဟု သိရှိနေကြသော်လည်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များ အနေဖြင့် ကရင်တော်လှန်းရေးခေါင်းဆောင် စောဘဦး ၏ ကျောက်တိုင် သတ်မှတ်ပေးသည့်အတွက် ၀မ်းသာမဆုံး လွန်စွာ ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဘဲဥကို မုန်လာဥ လုပ်သည့်နေရာတွင် အရမ်းကျွမ်းကျင်ခဲ့လို့ ဒုတိုင်းမှူးဘ၀ကနေ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်အသိုင်းမှ ဝေဖန်မှုများ ပြန့်လွင့်ခဲ့သည်။ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ယခင်က ၀န်ထမ်းများကို ပါးရိုက်၊ စောင့်ကန်၊ ဆဲဆိုခြင်းများနှင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါ ၄င်း၏ အသံမထွက်ရန် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ တဆင့် မိုက်ရိုင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ် စေခဲ့သည်။
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့သည် ၄င်းတို့၏ မွေးထားသော မိဘမျက်နှာ မထောက်ပဲ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၏ မိုက်ရိုင်းစေသည့် အပြုအမူကို ကျင့်သုံးကာ ပြည်သူများကို ဆက်ဆံကြသည်။
ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကိုပင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လူမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ခင်ဗျားပါးစပ်ပိတ်ထားဟု မိုက်ရိုင်းစွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြ၀တီမြို့ ပြည်သူများအနေဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အမြန်ဆုံးပြောင်းစေချင်ကြသည်ဟု သိရှိနေကြသော်လည်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် ကရင်တော်လှန်းရေးခေါင်းဆောင် စောဘဦး ၏ ကျောက်တိုင် သတ်မှတ်ပေးသည့်အတွက် ၀မ်းသာမဆုံး လွန်စွာ ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
KWO Statement on World Refugee Day_ June 20th_2012 Karen Version